Nandray anjara tamin'ny Fampirantiana Iraisam-pirenena Johannesburg Structure International Building Material Exhibitation
Nanomboka tamin'ny 17 aogositra ka hatramin'ny faha-20, 2016 dia natao tao Johannesburg ny fampirantiana fitaovam-panorenana iraisam-pirenena any Afrika Atsimo. Ny vondrona Classic dia nandefa ekipa orinasa matihanina matihanina handray anjara amin'ny fampirantiana. Amin'ny alàlan'ny fanehoana ny marika marika sy ny tanjaky ny fampivoarana ny orinasa dia nahazo ny sain'ireo mpanentana tany ampitan'ny firenena maro.
Nandritra ny fampirantiana dia nanazava ny ekipa orinasa iraisampirenena momba ny R&D, ny famokarana, ny fananganana ary ny fananganana tranobe vita amin'ny vy, ny teknolojia mandroso toy ny famokarana sy ny fikarohana momba ny trano fivoriambe ary ny fitoeran-dàlana mitambatra amin'ny tany, ary ny fanamafisana ny takelaka vita amin'ny manda. Nasongadina ny vokatra. Nandritra ny fampirantiana efatra andro, dia nanatrika ny tsena ny trano fandraisan'ny Vondron'olona mahazatra. Rehefa avy nahatakatra ny hery feno sy ny vokatra vita amin'ny orinasa dia nahatratra fifanarahana fiaraha-miasa matotra amin'ny mpiasa ny mpanjifa vaovao sasany.
Ny fampirantiana fitaovam-panorenana iraisam-pirenena momba ny fanatanjahan-tena ao Afrika Atsimo dia nitombo ho fampirantiana fitaovana matihanina indrindra any Afrika. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, miaraka amin'ny fanafainganana ny fizotran'ny fomban-tany Afrikanina dia nitombo ny sain'ireo fiandohana ny firenena afrikanina. Nitombo ny fangatahana amin'ny fananganana fotodrafitrasa toy ny sekoly, ny hopitaly, ny seranam-piaramanidina, ny seranana, ary ny lalamby. Ny Vondrona Klasikaly dia naka fotoana ho an'ny fampandrosoana ary nametraka tamim-pahavitrihana sy nanitatra ny tsena afrikana. Amin'ny lafiny iray, ny orinasa dia manantona ny maha-zava-dehibe ny fanavaozana ara-teknolojia, mampivoatra ny kalitaon'ny vokatra sy ny injeniera, mampitombo ny fitarihan'ny marika amin'ny kilasy, ary mandray anjara amin'ny fampirantiana fitaovam-panorenana iraisam-pirenena sy hetsika fifanakalozana hafa, mifantoka tsara amin'ny filàn'ny mpanjifa any ivelany. ary mamolavola ny vokatra sy ny tetik'asa izay mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa. Manafainganana ny fizotra iraisam-pirenena.
Amin'ny dingana manaraka, ny vondrona Klasika dia hifanaraka amin'ny toe-tsaina orinasa "fifantohana, fanavaozana, pragmatisma ary fahombiazana ambony", manome an-tsehatra feno amin'ny tombotsoan'ny fananganana mandroso, ny R&D ary ny famolavolana, ny fananganana ary ny fananganana, hanamafy orina ny serivisy, hanatsara ny fifaninanana iraisam-pirenena , ary manamafy ny fiaraha-miasa isam-paritra hahatratrarana ny fiaraha-miasa mandresy. , Miaraha manangana.